Kwụsị Bailing, Ka itinye ego na Ohere | Martech Zone
Tọzdee, Nọvemba 13, 2008 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
Ndị America kpọrọ asị ida agha, oge. N'otu echiche, ụlọ ọrụ na-anwụ anwụ na-anwụ anwụ bụ agha anyị chere na anyị efuola. Ekwetaghị m na ihe ọ bụla efunahụ m, ekwenyere m na anyị na-aga n'ihu. Ọrụ na-aga mba ofesi na-ada ụda mgbe niile, mana ndị mmadụ na-elegharakarị anya na anyị na-ekepụta ọrụ ọhụụ ebe a na mba a anụbeghị mbụ.
Abụ m ibi ndu nke a. Ọhụrụ n'thetù Ndị Agha Mmiri, ọrụ mbụ m bụ ụlọ ọrụ ọkụ eletrik na akwụkwọ akụkọ. Anọ m na ụlọ ọrụ akwụkwọ akụkọ ruo afọ iri tupu a chụpụ m, enwere m ekele ruo mgbe ebighi ebi. M na-eche ihe gaara eme ma a sị na ndị isi m nọ ya gbapụtara na achọghị ịgbanwe. M ka ga-ata ahụhụ na ụlọ ọrụ na-anwụ anwụ?
Lelee Ọnọdụ Social Media Manager nke ahụ mepere HP. Ha na-acho onye nwere ihe ntaneti gosiputara na blog, ihe omuma nke Wikis na Twitter. Ha choro igbanwe ihe omuma nke onye ahu ma mepee Igosiputa Igosi Ngwangwa maka ahia iji nyochaa usoro mgbasa ozi ha.
Kọmputa n'ichepụta kpaliri offshore ọtụtụ afọ gara aga… bụ ụmụ okorobịa ahụ tụfuru ọrụ ha esenidụt na-achọ a handout si US Government? Mba, ha gbanwere uzo wee gbanwee onyinye ha site na imepụta na imepụta ya wee bido ya n'ime mmalite azụmaahịa na ọgụgụ isi na ịntanetị.
Ọ bụrụ na mba anyị (na ndị ọzọ) chọrọ ịnọgide na-ebute ụzọ n'ịzụ nkà na ụzụ, mgbe ahụ anyị kwesịrị ịdị na-ele anya n'ọdịnihu. Anyị emeela ụgbọala ugbua… lelee ya na ndepụta ahụ ma hapụ ya ịkwaga mba agụụ na-agụ iji weghara ya. Ka ọ dị ugbu a, ndị ọrụ ụlọ ọrụ ụgbọ ala anyị kwesịrị ileba anya n'ihe ịma aka ọzọ dị ka injinia na iwupụta isi iyi ndị ọzọ.
Maka ndị mgbere ụlọ akwụkwọ ol, ọ bụ oge ịkwaga na ndị folks! Bido kụziri onwe gị na ndị ahịa gị ohere ọzọ - ịde blọgụ, njikwa aha na mgbasa ozi mmekọrịta dị ebe a - ha anọghị na mmiri. Oge erugo ịme mgbanwe ahụ, tupu ị banye n’ahịrị na-arịọ maka mgbapụta.
N'akụkụ ederede, na-atụnye HP maka ịtụle mkpa ọ dị iji mepụta usoro mgbasa ozi mmekọrịta mmadụ na ibe ya!
Nov 14, 2008 na 12:50 PM
Enweghị m ike ikwenyekwu. Ọ dị ka ụfọdụ ebe / ndị mmadụ achọghị ịgbanwe ma gbanwee ka obodo anyị si agbanwe na teknụzụ. Echere m na Indiana bụ ezigbo ihe atụ nke ahụ, yabụ ọtụtụ mmemme gọọmentị agbadoro anya na ijigide ma mepụta ọrụ nrụpụta, ebe ha leghaara anya na Indiana nwere ike ịbụ hotbed maka ọganihu teknụzụ.
Nov 14, 2008 na 3:30 PM
Tinye Doug nke ọma - ọ nweghị ụzọ kacha mma iji gbochie ihe okike na ihe ọhụụ karịa ịkwụghachi ụgwọ ọdịda ahịa (ịghara ịkọwa mkpebi azụmaahịa ọjọọ) site n'aka gọọmentị.